WeTransfer: kedu ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ? | Akụkọ akụrụngwa
WeTransfer: kedu ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ?
Anyị ga-ekwu maka ngwa nke na-eme ebe n'etiti ndị kachasị ewu ewu na ntinye faịlụ na igwe ojii. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịfefe faịlụ buru ibu na ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ onye isi gị, enwere ngwa ole na ole na ahịa nwere ike ịmakọ WeTransfer.. Nke a dị mma ọkachasị mgbe ịchọrọ izipu faịlụ na mail anaghị ekwe ka ị gbakwunye. Nwere ike iji ya kpam kpam n'efu na ọ naghị agwa gị ka ị denye aha iji zipu ma ọ bụ nata faịlụ.
Dị ka anyị kwurula, WeTransfer dị ugbu a n'etiti ngwa ndị kachasị ewu ewu nke ụdị a. Anyị ga-akọwa nke ọma ihe kpatara ngwa a ka akwadoro n’elu ngwa dị ka Dropbox maka iji ya igwe ojii nchekwa. Ọ bụ ezie na ndị kasị akpali bụ doro anya na nyefe nke faịlụ na-enweghị tupu aha n'etiti ọrụ. Gụọ na chọpụta ihe WeTransfer bụ na otu o si arụ ọrụ.
1 Gịnị bụ WeTransfer?
1.1 Uru nke iji WeTransfer
2 Etu esi eji ya
2.1 Simplezọ kachasị mfe
3 Jiri WeTransfer na mkpanaka
Gịnị bụ WeTransfer?
WeTransfer bụ ihe online n'elu ikpo okwu na dabeere na ígwé ojii na e mere nke mere na ị nwere ike nyefee dị iche iche nke faịlụ ndị ọzọ ọrụ kpamkpam free na netwọk. Ọ ghọwo otu n'ime ngwa ndị a ma ama na mpaghara ahụ n'ihi ịdị mfe nke iji ya, ọsọ ya na, karịa ihe niile, ụgwọ 0 ya. Ọ bara ezigbo uru iziga faịlụ buru ibu na otu ma ọ bụ ọtụtụ mmadụ n'otu oge, naanị iji akaụntụ email.
Otu uru ya kachasị pụta ìhè nke na-eme ya karịa nhọrọ ndị ọzọ bụ nke ahụ ọ naghịdị ajụ maka ndebanye aha tupu oge eruo. Ọ naghị ajụ onye nnata nke faịlụ ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị nsogbu ịme nrụnye ma ọ bụ jikọta ozi anyị na ndekọ ọ bụla, naanị họrọ faịlụ ma zipụ site na iji akaụntụ email anyị.
Uru nke iji WeTransfer
Ngwa a anaghị ajụ anyị ụdị ndebanye aha ọ bụla, mana ọ bụrụ na anyị emee, anyị nwere ike ịmepụta akaụntụ nkeonwe, ọbụlagodi atụmatụ ịkwụ ụgwọ nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ nhọrọ ndị ọzọ dị elu. Obi abụọ adịghị ya na onye a kacha mara amara bụ zipu faịlụ ruru 20 GB kama 2 GB anyị nwere ike ịnyefe n'efu.
Atụmatụ a na-enye anyị uru ndị ọzọ bara uru maka onye ọrụ dị elu. Oghere 100 GB ịchekwa igwe ojii, ọtụtụ GB ma ọ bụrụ na anyị ga-echekwa ọtụtụ vidiyo ma ọ bụ Foto, yana ọrụ. Anyị nwere ikike iji hazie akaụntụ anyị na akụkụ dị iche iche maka ibe sitere na ebe ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ibudata faịlụ anyị na-ekekọrịta. Atụmatụ ịkwụ ụgwọ a nwere ego nke € 120 kwa afọ ma ọ bụ € 12 kwa ọnwa.
Etu esi eji ya
Dịka anyị tụlere n’elu, enweghị ndebanye aha dị mkpa iji jiri ọrụ ịkesa faịlụ free WeTransfer. Zọ kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji ọrụ a bụ site na ihe nchọgharị weebụ.
Mbụ anyị nweta peeji gị ukara website si ọkacha mmasị anyị na ihe nchọgharị weebụ. Na nke mbụ, ọ ga-ajụ anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ụdị nke a na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ahọrọ ịmekọrịta atụmatụ gbakwunyere na uru ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Anyị na-pịa were m ka m zitere nnukwu faịlụ anyị n'efu.
Ugbu a, anyị ga-ahụ onwe anyị na ibe ọrụ, yana atụmatụ mara mma nke anyị nwere ike ịme naanị họrọ nhọrọ nke gosipụtara n’igbe dị n’aka ekpe. Oge izizi anyị jiri ya, anyị ga-anakwere ọnọdụ ma nabata nkwekọrịta (ihe dị na ọrụ ọ bụla n'ịntanetị). Anyị pịa ịnabata ma gaa n'ihu.
Ugbu a igbe ahụ ga-agbanwe iji gosipụta ọzọ ebe data mbupu maka faịlụ gị. Anyị dejupụtara ya iji gaa n'ihu.
Anyị pịa bọtịnụ + ahụ iji gbakwunye faịlụ anyị chọrọ izipu na kọmputa anyị. Iji mee nke a, ihe nchọgharị anyị ga-emeghe ihe nyocha faịlụ iji họrọ ha. Cheta na site na nnwere onwe nke kachasị nha kwa faịlụ bụ 2 GB. Dị ka ngụkọta, ya bụ, ọ bụrụ na anyị ahọrọ ọtụtụ faịlụ ha ekwesịghị ịgafe 2 GB na ibu.
Mgbe ị gbakwunye faịlụ anyị chọrọ ịnyefe, anyị pịa akara ngosi nke ntụpọ 3 na anyị nọ n'aka ekpe ka họrọ ụzọ anyị chọrọ ịkekọrịta faịlụ.
Anyị nwere nhọrọ abụọ. Ọ bụrụ na anyị họrọ nhọrọ email, WeTransfer Ọ ga-elekọta itinye faịlụ ndị ahụ na igwe ojii ya ma ozugbo usoro ahụ gwụchara, ọ ga-eziga email na adreesị ị banyere, na-egosi onye nnata na ị zitere ha ụfọdụ faịlụ na ha nwere ike ibudata naanị site na ịpị njikọ dị na ozi-e.
Nhọrọ ozo bu "Njikọ" na ga-n'ịwa a njikọ ịkọrọ site a ngwa ngwa dị ka Telegram ma ọ bụ WhatsApp. Njikọ a na-ebute onye nnata na ibe WeTransfer ka ha nwee ike ibudata faịlụ na kọmputa ha n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na anyị nwere atụmatụ ịkwụ ụgwọ, Anyị na-arụ ọrụ dị iche iche na-enye anyị ohere ịkwalite nchebe nke faịlụ anyị ma gosipụta ụbọchị njedebe ha.
Simplezọ kachasị mfe
Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ email ahụ bụ nke kachasị dịrị nchebe ma dị mfe, ebe ọ ga-ezu iji tinye adreesị ozi-e nnata onye na-enweghị dabere na nnweta ha ma ọ bụ nke ngwa izipu ozi ha. Anyị nwere ike tinye ozi na ntuziaka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ozugbo ezitere faịlụ ndị ahụ, a ga-egosi eserese na pasent nke arụmọrụ rụchara. Yabụ ka etinyere pasent a, anyị enweghị ike imechi ihe nchọgharị weebụ, ma ọ bụ gbanyụọ kọmputa ahụ n'ezie. Oge mbufe na-adabere na njikọ intaneti anyị na saturation nke ihe nkesa ahụ.
Mgbe emechara anyị ga-enweta ozi-e na adreesị anyị gosipụtara igosi anyị gbasara mmecha nke mbufe ahụ. Nakwa onye nnata ahụ ga-enweta ozi email na-agwa maka nnabata nke faịlụ maka nbudata. Mgbe nnata ahụ budatara faịlụ ndị ahụ, anyị ga-enweta email ọzọ na-agwa ndị nnabata wee budata na nke ha.
Jiri WeTransfer na mkpanaka
Anyị nwere nhọrọ nke izipu faịlụ site na Smartphone anyị, nhọrọ kachasị mma maka nke a bụ ịwụnye ngwa maka iOS ma ọ bụ gam akporo. Ọrụ dị na ụdị mkpanaka ahụ yiri nke weebụsaịtị ahụ, naanị anyị ga-ahọrọ faịlụ anyị chọrọ ịkekọrịta ma họrọ ngwa ma ọ bụ mmemme anyị ga-eziga njikọ nbudata na.
Anakọta site na WeTransfer
Developer: Weefere BV
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » WeTransfer: kedu ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ?
Philips 273B9, ihe nlebara anya nke na - akwalite ọrụ igwe [Analysis]
Amazon Fire TV Stick (2020), kpochapụwo nke ka na-arụ ọrụ